Isitudiyo esithokomele i-HYPER CENTRE, i-Strasbourg Cathedral - I-Airbnb
Isitudiyo esithokomele i-HYPER CENTRE, i-Strasbourg Cathedral
640 okushiwo abanye
Strasbourg, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, i-France
I-studio itholakala esakhiweni sekhulu le-17, esitezi sokuqala endaweni engaphakathi, ethule futhi eseduze neKhathedrali. Lesi sidleke esincane esithokomele sangempela sizokuvumela ukuthi uthole izimakethe zikaKhisimusi kanye nenhloko-dolobha yaseYurophu. Kungaphansi kwe-Alsatian Museum, Batorama, Petite-France kanye nezindawo zokudlela eziningi; ilungele imibhangqwana, izihambi nosomabhizinisi. Ngizophinde ngijabule ukukunikeza amakheli angcono kakhulu ukuze uqedele ukuhlala kwakho.
Ikhishi lifakwe i-microwave, ama-hotplates angu-2, isiqandisi, yonke into oyidingayo ukuze upheke futhi ube nesidlo sasekuseni sakho: I-Nespresso coffee maker enamakhapsuli, izikhwama zetiye, i-toaster, ushukela.
Endlini yokugezela uzothola ijeli yokugeza, isomisi sezinwele kanye nesomisi sethawula.
Kuhlinzekwa amashidi namathawula okugeza. Indawo yokulala iyigwebu lenkumbulo.
4.75 out of 5 stars from 640 reviews
4.75 · 640 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-640
Uzohlala enhliziyweni yeStrasbourg esifundeni esinomlando nesiphilayo. Uzothola izimakethe eziningi zikaKhisimusi. I-cathedral ikude nge-100m. Izindawo zokudlela eziningi ezijwayelekile nezihlukahlukene zikulindile ukuthi wenelise ukudla futhi uthuthukise ukuhlala kwakho.
Ifulethi liyasebenza, liyathandeka futhi lifudumele
Vele, ngihlala nginakho ukukusiza ukwandise ukuhlala kwakho futhi ukwenze kube mnandi ngangokunokwenzeka. Ungangabazi ukungithinta ngalokhu. Esitudiyo uzoba nemephu yedolobha, izithuthi zomphakathi kanye nabaqondisi bezivakashi
Inombolo yepholisi: 674820017143B